China PC isityumzi kwemveliso kunye Factory | Jiarui
PC PC isityumzi zeplastiki ukufunxa technology lwasekhaya lwangaphandle phambili; Inoyilo olusengqiqweni kunye novavanyo oluphindaphindiweyo kwaye iyaqhubeka nokuphucula.
1. Isixhobo esikhethekileyo esenziwe ngentsimbi sisetyenziselwa ukuphucula isixhobo sokusika. Ukucoca isixhobo kunokulungiswa, kwaye isixhobo sinokulolwa ngokuphindaphindiweyo kwaye somelele.
2. Isikhonkwane esomeleleyo sentsimbi sisetyenziselwa ukubopha ibhleyidi kunye nesiseko sokusika, esinamandla okuthwala.
3. Isantya esisezantsi kunye nokugquma kwesandi kwamkelwa ukunciphisa ingxolo.
4. Isithuthi sixhotyiswe ngokhuseleko olukhulu nangaphezulu kunye nesixhobo sokukhusela amandla ekungeneleleni ukukhusela kabini ukhuseleko lomqhubi kunye nomqhubi.
5. I-hopper yokondla yamkela uyilo olulungiselelwe kunye nonyango olukhethekileyo lokurusa umhlwa ukunqanda ukuvuza kunye nongcoliseko lwezixhobo kwinkqubo yokutyunyuzwa.
6. Uyilo olwahlukileyo, i-hopper, umzimba ophambili, isiseko sesihluzo kulula ukususa nokucoca.
7. Uyilo olugqibeleleyo lwesixhobo sokukhupha senza ukuba kube lula kakhulu ukuba umsebenzisi acoce.
8. Uhlobo lweleli elihamba noyilo lwemela, ukophula amandla lomelele kakhulu.
Iimpawu yokusebenza sheet isityumzi:
Ulwakhiwo lomsiki wentsimbi uphakathi kwemela uzipho kunye nemela ethe tyaba, efanelekileyo yokutyumza iimveliso zeplastiki kunye ne-sprues ezinje ngephepha eliqhelekileyo, umbhobho, iprofayili, ipleyiti kunye nezinto zokupakisha.Iinjongo ngokubanzi zeplastikhi yeplastikhi yamkela ukuthwala okutywinwe ukugcina ukuthwala kuqhuba kakuhle ixesha elide; uyilo lwesimo semela lusengqiqweni kwaye imveliso yegranulation iyafana; isihlalo sokusika bubushushu obunqabileyo, kwaye uyilo lwembonakalo luhle kwaye lunesisa.
Iimpawu Performance of uzipho mgawuli isityumzi:
Kufanelekile ukutyunyuzwa nokusetyenziswa kwakhona kwazo zonke iintlobo zeeplastikhi, ngakumbi kuzo zonke iintlobo zeplastikhi ezilukhuni (ezinjengeentloko zezinto, isihlangu izinto zokugqibela, njl.), Uyilo olulungiselelwe ukuphumla kwesixhobo, imela yeenzipho ingasasaza amandla esandla, ke ukuba amandla okucheba kwemela nganye andisiwe, okulungele ukutyumza izinto ezishinyeneyo, iibhloko zezinto ezilukhuni, iintloko zezinto, njl .; inokuwuphucula ngokufanelekileyo amandla okusika nezixhobo zokusika nokunciphisa ukunxiba izixhobo; ixhotyiswe ngoyilo lolawulo lombane, kunye nebhokisi yomzimba yamkela ubume boBume boBabini, izaliswe zizinto zokwambathisa isandi, yenza ukuba izixhobo zibe nokhuseleko olulungileyo kunye nokukhuselwa kwendalo, ukugcina amandla kunye nokuhlala ixesha elide.
Iimpawu Performance of isityumzi tyaba mgawuli:
Ifanelekile ibhokisi, umbhobho obhityileyo, iinxalenye zokubumba, iibhotile, iigobolondo, i-PE, izinto zefilimu ze-PP kunye nezinye izinto zokurisayikilisha zeplastiki. Isicwecwe mgawuli isityumzi series kulula ukusebenza kwaye kulula ukuyitshintsha. Isakhiwo ebanzi tyaba imela ilungele ukutyunyuzwa iimveliso izinto ibhityile-obhityileyo kwaye ibhityile, kwaye kuphucula ukusebenza ngokutyunyuzwa. Kuxhotyiswe ngoyilo lokhuseleko kulawulo lombane, ubume bebhokisi enemaleko emibini kwaye izaliswe zizinto zokwambathisa izandi, ezenza ukuba izixhobo zibe nokhuseleko kunye nokhuseleko ukhuselo lokusingqongileyo, ukonga umbane kunye nokuhlala ixesha elide.
Okulandelayo: Ityesi enzima yePC
Umgca we-PVC osontiweyo we-Extrusion Line
Umgca wemveliso incence incence